के कारणले गर्दा ग्यास्ट्रिक हुन्छ ? यसबाट कसरी बच्ने ? – Everest Dainik – News from Nepal
के कारणले गर्दा ग्यास्ट्रिक हुन्छ ? यसबाट कसरी बच्ने ?
यस्ता छन् ग्यास्ट्रिकका लक्षण र त्यसबाट बच्ने उपायः
यी उपाय अपनाउनुहोस् ग्यास्ट्रिकबाट बच्नुहोस्-
योग गरेमा ग्यास्ट्रिक हुन सक्छ
ग्यास्ट्रिकबाट बच्न अर्को तरिकाले पनि योग गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि दुवै खुट्टा जोडेर घोप्टो परी सुत्नुपर्छ । त्यसपछि दुई हत्केलाले भुइँ टेकेर आकाशतर्फ हेर्नुपर्छ । त्यसपछि बिस्तारै श्वास लिँदै छाती फुलाउनुपर्छ । त्यसपछि केहीछिन श्वासलाई रोक्ने कोसिस गर्नुपर्छ । त्यसपछि श्वास छाडेर पहिलेकै अवस्थामा फर्कनुपर्छ । नाडीशोधन योग गरेर पनि ग्यास्ट्रिक निर्मूल पार्न सकिन्छ । एजेन्सीको सहयोगबाट